My Dear Diary » အပျင်းပြေပါရွာသားတို့ ရေ…။	19
တောဇီးကွက် says: အပေါ်က အစ်မအေးဆိုလို့ အစ်မအေးပဲ ခေါ်ပါရစေရှင့်
တခါမှ ပြန်မရခဲ့ဘူး မမအေးရှင့်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2374
min kyansix says: ကြားဖူးနားဝပုံပြင်လေးတွေမှာ
aye.kk says: တောဇီးကွက်
padonmar says: အဲဒီ ကြန်အင်တွေ တခုမှ မပြည့်စုံပါဘူး။
မြစပဲရိုး says: ဝုတ်ပါဘူး။
ဟို အိုင်အို ကြီး က ကျက်သရေရှိ အေးချမ်း တဲ့ မျက်နှာလို့ ပြောထားတာပါလေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
kyeemite says: .မျက်ခုံး ကတော့ကံမကောင်းဘူးဗျာ..ရေးရေးလေးနဲ့ တိုတိုလေးပဲပါတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2374
Maung Thura says: ဘာလို့လဲမတိ…
အဲ့ပုံထဲကကောင်မလေးတွေကို ကြည့်ပြီး..ဗိုက်ဆာလိုက်တာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2374
manawphyulay says: အတွင်းမနော ဖြောင့် မဖြောင့်တော့ မသိဘူး။ နာမည်ကိုက မနောဖြူလေးပါဆို…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2374
aye.kk says: မနောဖြူ
Kaung Kin Pyar says: ညန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ မှန်းလို့ရမယ်….
aye.kk says: ကောင်းကင်ပြာ
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ် အန်တီအေး
Wow says: အဟွာလေ လူတစ်ယောက်ကို နဖူးရေဒူးရေကျိရဒယ်ဆိုတော့ တဂယ်ဂျီး ဒူးခေါင်းပါကျိရတာလားဟင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2374
aye.kk says: ရုပ်တရားတွေဆိုတာ